အသက် ၁၆ နှစ် မှ ၂၄ နှစ်အတွင်း မိန်းကလေးများသာ ဖတ်ရန်… -
ညီ မ လေး ရေ ….
လှ ပ တဲ့ မျက် နှာ တစ် ခု က တစ် ချိန် ကျ ရင် အို မင်း သွား လိမ့် မယ် … ။
စွဲ မက် စ ရာ ခ န္ဓာ ကိုယ် ကောက် ကြောင်း တွေ က လည်း တစ် ချိန် ကျ ရင် ပြောင်း လဲ သွားပါ လိမ့် မယ် နော် … ။
ဒါ ပေ မယ့်
မိန်း မ ကောင်း တစ် ယောက် က တော့ တစ် ချိန် ကျ ရင် လည်း မိန်း မ ကောင်း ပါ ပဲ ။ ဘယ်အ ချိန် ပဲ ရောက် ရောက် မိန်း မ ကောင်း ပါ ပဲ … ။
ညီ မ လေး ရေ ဇွဲ မ လျော့ နဲ့ လူ တွေ က တော့ ညီ မ လေး ပြုံး နေ တာ ထက်
ညီ မ လေး ရှုံး နေ တာ မြင် ချင် တဲ့ သူ က ပို များ နေ တတ် တယ် … ။
ညီ မ လေး ရေ …ရည် မှန်း ချက် ထား
ဒေါ် အောင် ဆန်း စု ကြည် ၁၂ အ ရွယ် က လေး ဘ ဝ က သူ ရေး ခဲ့ တာ လေး တစ် ခု ရှိ တယ် …။
မျက် စေ့ မ မြင် သော မိန်း က လေး သည် ကြား နိုင် သေး ၏ ။ နား မ ကြား သော မိန်း က လေးသည် မြင် နိုင် သေး ၏ … ။
အ ဝတ် မ ပါ သော မိန်း က လေး သည် အေး မြ မှု ကို ခံ စား နိုင် သေး ၏ … ။
ရည် မှန်း ချက် မ ရှိ သော မိန်း က လေး သည် အ ရူး ပ မာ သာ တည်း တဲ့ … ။
ညီ မ လေး ရေ…
ဘ ဝ ကို စိတ် မ ပျက် နဲ့ သည်း ခံ ခြင်း တွေ ရဲ့နောက် မှာ အောင် မြင် ခြင်း တွေ ရှိ ကို ရှိ တယ် … ။
ပေး ဆပ် ခြင်း တွေ ရဲ့နောက် မှာ ရ ယူ ခြင်း တွေ လဲ ရှိ တယ် … ။
ရှုံး နိမ့် ခြင်း တွေ ရဲ့နောက် မှာ လဲ သင် ခန်း စာ တွေ ရှိ တယ် … ။
အ ရေး ကြီး တာ က မ ဆုတ် မ နစ် ကြိုး စား နေ ဖို့ ပဲ လို တာ ပါ … ။
ညီ မ လေး ရေ မြဲ မြဲ မှတ် ထား …
လိပ် ပြာ မ လုံ တဲ့ သူ က မူ မ မှန် ဘူး ။ သိ က္ခာ မ လုံ တဲ့ သူ က လူ မ ဆန် ဘူး … ။
ညီ မ လေး ရေ …
ကိုယ့် ဘ ဝ ကို တန် ဖိုး ထား ရ ခဲ လှ တဲ့ လူ့ ဘ ဝ ကို ရောက် တုန်း လေး
ကောင်း သော အ မူ အ ကျင့် နဲ့ ကောင်း သော စာ ရိ တ္တ ကို ကျင့် သုံး ပါ … ။
ကောင်း သော အ သက် မွေး ဝမ်း ကျောင်း မှု နဲ့ ကောင်း သော ဘ ဝ ကို တည် ဆောက် ပါ … ။
ပတ် ဝန်း ကျင် က မ ကောင်း ပြော ကြ ပါ စေ အ ချိန် တန် ရင် ပါး စပ် ပိတ် သွား လိမ့် မယ် … ။
အသကျ ၁၆ နှဈ မှ ၂၄ နှဈအတှငျး မိနျးကလေးမြားသာ ဖတျရနျ…
ညီ မ လေး ရေ ….
လှ ပ တဲ့ မကျြ နှာ တဈ ခု က တဈ ခြိနျ ကြ ရငျ အို မငျး သှား လိမျ့ မယျ … ။
စှဲ မကျ စ ရာ ခ န်ဓာ ကိုယျ ကောကျ ကွောငျး တှေ က လညျး တဈ ခြိနျ ကြ ရငျ ပွောငျး လဲ သှားပါ လိမျ့ မယျ နျော … ။
ဒါ ပေ မယျ့
မိနျး မ ကောငျး တဈ ယောကျ က တော့ တဈ ခြိနျ ကြ ရငျ လညျး မိနျး မ ကောငျး ပါ ပဲ ။ ဘယျအ ခြိနျ ပဲ ရောကျ ရောကျ မိနျး မ ကောငျး ပါ ပဲ … ။
ညီ မ လေး ရေ ဇှဲ မ လြော့ နဲ့ လူ တှေ က တော့ ညီ မ လေး ပွုံး နေ တာ ထကျ
ညီ မ လေး ရှုံး နေ တာ မွငျ ခငျြ တဲ့ သူ က ပို မြား နေ တတျ တယျ … ။
ညီ မ လေး ရေ …ရညျ မှနျး ခကျြ ထား
ဒျေါ အောငျ ဆနျး စု ကွညျ ၁၂ အ ရှယျ က လေး ဘ ဝ က သူ ရေး ခဲ့ တာ လေး တဈ ခု ရှိ တယျ …။
မကျြ စေ့ မ မွငျ သော မိနျး က လေး သညျ ကွား နိုငျ သေး ၏ ။ နား မ ကွား သော မိနျး က လေးသညျ မွငျ နိုငျ သေး ၏ … ။
အ ဝတျ မ ပါ သော မိနျး က လေး သညျ အေး မွ မှု ကို ခံ စား နိုငျ သေး ၏ … ။
ရညျ မှနျး ခကျြ မ ရှိ သော မိနျး က လေး သညျ အ ရူး ပ မာ သာ တညျး တဲ့ … ။
ညီ မ လေး ရေ…
ဘ ဝ ကို စိတျ မ ပကျြ နဲ့ သညျး ခံ ခွငျး တှေ ရဲ့နောကျ မှာ အောငျ မွငျ ခွငျး တှေ ရှိ ကို ရှိ တယျ … ။
ပေး ဆပျ ခွငျး တှေ ရဲ့နောကျ မှာ ရ ယူ ခွငျး တှေ လဲ ရှိ တယျ … ။
ရှုံး နိမျ့ ခွငျး တှေ ရဲ့နောကျ မှာ လဲ သငျ ခနျး စာ တှေ ရှိ တယျ … ။
အ ရေး ကွီး တာ က မ ဆုတျ မ နဈ ကွိုး စား နေ ဖို့ ပဲ လို တာ ပါ … ။
ညီ မ လေး ရေ မွဲ မွဲ မှတျ ထား …
လိပျ ပွာ မ လုံ တဲ့ သူ က မူ မ မှနျ ဘူး ။ သိ က်ခာ မ လုံ တဲ့ သူ က လူ မ ဆနျ ဘူး … ။
ညီ မ လေး ရေ …
ကိုယျ့ ဘ ဝ ကို တနျ ဖိုး ထား ရ ခဲ လှ တဲ့ လူ့ ဘ ဝ ကို ရောကျ တုနျး လေး
ကောငျး သော အ မူ အ ကငျြ့ နဲ့ ကောငျး သော စာ ရိ တ်တ ကို ကငျြ့ သုံး ပါ … ။
ကောငျး သော အ သကျ မှေး ဝမျး ကြောငျး မှု နဲ့ ကောငျး သော ဘ ဝ ကို တညျ ဆောကျ ပါ … ။
ပတျ ဝနျး ကငျြ က မ ကောငျး ပွော ကွ ပါ စေ အ ခြိနျ တနျ ရငျ ပါး စပျ ပိတျ သှား လိမျ့ မယျ … ။
This Year : 314981
Total Users : 610114
Total views : 2985576